Sidee baan u kormeeri karaa backlinks boggeyga si aan u dareemo ammaan?
Dhamaan waxaad u baahan tahay inaad dareento ammaan inay tahay inaad dib u eegto backlinks iyo ka saaro kuwa xun ogeysiis gaaban. Inta badan, waxaan isticmaalaa Moz's Open Site Explorer iyo Naqshadeeyaha Semhtarka si loo hubiyo labalaab. Laakiin sidee ugu sheegtaa dhabarka xun ee kuwa wanaagsan? Hoosta ayaan ku sharxi doonaa taas.
Maxaa keenaya gadaal xun?
Ku dhigista Ingiriisi cad, xiriirka ugu xun waa hal jabis (haddii kale, gef ku ah) tilmaamaha ugu muhiimsan ee Google ee loogu talagalay websaydhka. Oo waxaa jira sifooyin guud oo guud oo ka dhigaya mid xun oo ujeedo ujeedo SEO ah (haddii kale, backlink sun ah). Xidhiidh kasta oo xun ayaa had iyo jeer ka yimid mid ka mid ah kuwan:
Bog kasta ama blog kasta oo horayba u kasbaday ganaax ah Google - haddii uu darajadiisa si toos ah u hoos ugu dhaco algorithm, ama gacanta loo jiido - Isku xirnaanshaha iyaga ayaa kula wadaagaya isla sidaas.
ilo aan dhammeystirnayn, iyada oo aan lala xiriirin boggaaga internetka ama mawduuca mawduuca. Iyadoo la tixgelinayo in ujeedada dhabarka dhabarku ay tahay mid muhiim ah, waxa fiican inaadan dib u helin dhabarkaaga, halkii aad ka dhigi lahayd wax badan oo aan ku haboonayn.
Shabakadaha xun ama blogyada leh waxyaabo aad u yar oo tayo sare leh oo bogga ku jira - oo aan faa'iido u lahayn dadka dhabta ah, ilaha noocan oo kale ah waxay noqon doonaan kuwo aan faa'iido lahayn si ay dib ugu helaan.
Wicitaanada tayada hooseeya oo isticmaalaya maqaallo daabacan oo leh waxyaabo isku dhafan, iyo sidoo kale shabakadaha shabakadaha - iska ilaali qiimaha oo dhan, haddii aadan rabin inaad ganaax degdeg ah ka hesho Google.
Bogagga internetka ee la xiriira sarkaalka, khamaarka, ama farmashiyaha, iyo sidoo kale buugaagta bulsheed, kuwa la jabsaday ama kuwa xayawaan-dilaacaya.
Boodhooyin tayadoodu hooseyso oo soo dhaweynaya boosteejo weyn oo marti ah. Dabcan, martida martida lafteedu waa hab weyn oo dib loogu soo celiyo, laakiin waxaad leedahay laba-hubin aad ku sugan tahay meesha saxda ah si aad ugu darsato mawduucaaga qiimaha leh.
Dib u eegista dib u celinta si ay uga takhalusaan kuwa ugu xun
Marka aan fahamno waxa ka dhigi kara gadaal xun, waa wakhti aad ku hubiso boggaaga internetka ama blog. Sidaan horey u sheegay, isticmaalka mid ka mid ah qalabyada internetka ayaa ah habka ugu wanaagsan ee loola socon karo backlinks. Marka, adiga oo adeegsanaya Open Site Explorer ama Istaraatejiyaha Nadaafadda, waxaad si deg deg ah u falanqeyn kartaa faahfaahinta gadaashaada iyo xitaa sameynta jadwal joogto ah si loola socdo dib u qabsashada waqti go'an. Sidaas awgeed, waa inaad si degdeg ah uga takhalustaa ugu yaraan daafacyada ugu xun si looga hortago inay waxyeeleeyaan darajooyinkaaga.
Markaad buuxiso falanqaynta degdegga ah, waxaan kuu soo jeedinayaa inaad ka shaqayso. faylka csv si aad u xayeysiiso kaliya calaamadaha digniinta (ee kasta oo ay dhici karto in ay waxyeello u geystaan) laakiin xaalada ay ku leeyihiin Google Index. Habkaa, waxaad u socotaa si deg deg ah uga takhalusi kuwa ugu xun ee loo calaamadeeyay sida "domain aan la qoondeeynin. "Marka xigta, dhammaan waxaad u baahan tahay inaad sameyso waa inaad si taxadar leh u qiimeysaa xiriir kasta oo shaki leh oo lagu ogaado qalab cilmi baaris ah - oo go'aan ka gaaraya in laga saaro ama la go'aamiyo. Markaa ka dib, marna ha ka waaban inaad kashaqeysid falanqayn buuxda oo qoto dheer si loola socdo dib u eegista dhamaanba hababka oo dhan - taas oo kaa caawinaysa inaad fahamto qiimaha ay tahay miisaanka Source .